Umhla woMbane weeMpahla zeMpahla
Icandelo leMigangatho yezoTekisi kunye neMigangatho yeeTektile zoPhuculo lweZoshishino
Izixhobo eziMveliso zoTytile eziqhutyelwa ngexesha loPhuculo lweZoshishino
I-Industrial Revolution yaba yinguqu kwiinkqubo ezintsha zokuvelisa kwixesha elivela kwi-1760 ukuya kwixesha eliphakathi kwe-1820 no-1840.
Ngethuba lo tshintsho, iindlela zendlela yokuvelisa isandla zatshintshela zibe yimishini kunye nokuveliswa kweekhemikhali kunye neenkqubo zokuvelisa zesebe. Ukusebenza kwamandla wamanzi kuphuculwa kwaye, ukusetyenziswa kwamandla kagesi kunyuke. Izixhobo zomatshini zaphuhliswa kwaye inkqubo yefrikansi yenyuka.
Iingubo zaziyi-shishini eliphambili le-Industrial Revolution ngokubhekiselele kwingqesho, ukubaluleka kwemveliso kunye nentlawulo-mali. Icandelo lezotyhutyhi liye liyokuqala ukusebenzisa iindlela zokuvelisa zanamhlanje. I-Industrial Revolution yaqala eBrithani enkulu kwaye ubuninzi bezinto zobuchwepheshe ezibalulekileyo zaseBrithani.
I-Industrial Revolution yaba yintshintsho enkulu kwimbali; phantse zonke iinkalo zobomi bemihla ngemihla zatshintshile ngandlela-thile Umyinge wemali kunye nenani laqala ukukhula ngokuthe ngqo. Abanye bezoqoqosho bathi impembelelo enkulu ye-Industrial Revolution yinto yokuba umgangatho wokuphila kubantu abaqhelekileyo waqala ukunyuka ngokuqhubekayo okokuqala kwimbali, kodwa abanye bathi akuzange kuqale ukuphucula kude kube sekupheleni kwe-19 neye-20 ngeenkulungwane. Ngelixa elifanayo neNguqulelo yeShishino, okwenzeka eBrithani kwakukho inguqu yezolimo, eyanceda ekuphuculeni imilinganiselo yokuphila kunye neenkonzo ezongezelelekileyo ezifumanekayo kumashishini.
Izixhobo ezininzi zobunjineli bempahla zenzeke ngexesha elifutshane nje ngexesha loPhuculo lwezoPhuhliso. Nanku umgca wexesha elibalaselisa ezinye zazo:
I-1733 i-shuttle ehambayo eyenziwe nguJohn Kay - ukuphucuka kwimihlaba eyenza abacebisi bakwazi ukukhawuleza.
Ngo-1742 ii- kotton mills zavulwa kuqala eNgilani.
1764 Ukutshintsha i-jenny eyenziwe nguJames Hargreaves - umshini wokuqala ukuphucula kwisondo elijikelezayo.
1764 Isakhelo samanzi esakhiwe nguRichard Arkwright - umatshini wokuqala we-textile.
1769 Arkwright ilungelo lobunikazi bamanzi.
1770 I- Hargreaves i-patinent patent ye-Spinning Jenny.
1773 Iimpahla zokuqala zekotoni zokuqala zaveliswa kumafektri.
Ngo-1779 iCrompton yasungula i- mule ejikelezayo eyavumela ukuba kube nokulawulwa okukhulu kwenkqubo yokucoca.
I-1785 iCartwright ibonisa ilungelo lobungakanani. Kuphuculwe nguWilliam Horrocks, owaziwayo ngokuveliswa kwakhe kwebhatton yejubane eguquguqukayo ngo-1813.
I-1787 yokuveliswa kwempahla yeCotton yandile nge-10 ukususela ngo-1770.
Ngo-1789 uSamuel Slater waletha umatshini wokuloba imishini eMelika.
I-1790 Arkwright yakha isitya sokuqala esinamandla okuthambisa e-Nottingham, eNgilani.
Ngo-1792 uEli Whitney wasungula i- cotton gin - umatshini owazenzekelayo ukwahlula kwe-cottonse kwi-short-staple fiber fiber.
U-1804 uJoseph Marie Jacquard wasungula i-Jacquard Loom elalikhusele iingubo eziyinkimbinkimbi. UJacquard waqulunqa indlela yokuzenzekela ngokuzenzekelayo i-warp kunye ne-thread ye-weft kwi-silk ekhangela ngamaphetheni okurekhoda emigodini yomtya wekhadi *.
1813 UWilliam Horrocks wasungula i-batton yejubane eguquguqukayo (ukuphucula amandla okuphucula).
1856 UWilliam Perkin wasungula idayi yokuqala yokwenziwa.
I-Kindergarten Ed Tech Ukuhlola
Yintoni i-Orographic Precipitation?
Indlela yokusebenzisa iiMbali zeMatriki kwiCandelo
Unwind nge-Neal Shusterman Book Review
Incinci kunye neFree-Prerequisite for Success
Ngaba iiCigarettes zifanele zibe mthethweni?
Iikholeji zeeKholeji zifuna iKhono yeZakhono, kodwa unako ukufunda i-Intanethi yeFree
5 Isizathu Sokuba Wonke Umntu Ufanele Abukele 'Ukuqhawula Amandla'
I-First Playboy Magazine
Iindaba zeMvalelo zengculaza ye-Ovarian Bhekisela kwizifundo ezibalulekileyo
Inkcazo yokuSebenza koBume kwiSicwangciso seZikolo
I-Academy ye-Coast Guard ye-GPA, iSAT kunye ne-ACT Data